CAQLI DARADA MULXIDIINTA – Sumcadda Islaamka
In dhowaalaba waxaa baraha bulshada ee afka soomaaliga lagu qoro ama lays-kala halo lagu arkayay mulxidiin tiro yar oo iyaga oo is qarinaya intooda badan bogaga uu facebook ugu muuq dheer yahay ka soo seeraariya qoraalo iyo codad muhiimadoodu tahay in Alle iyo diin lagu inkiro.
Qaban qaabada duullaan xaga fikirka ah ee qolooyinkan iyaga oo abaabulan ku soo qaadeen caqiidada iyo iimaanka umadda afka soomaaliga ku hadasha waa mid muuqata oo saameynteeda leh oo marba marka ka dambaysa isa soo taraysa.
Sidaa darteed ayaan u arkay inay tahay mid mudan ka hadal iyo baraarujin kooban oo iyaga iyo inta ay waswaasin karaanba ay tahay in lagula taliyo.
Inta badan Alla koodyada tirada yar ee garwadeenka u ah afkaartan lagu inkirayo Alle iyo diimaha waxa uu bar tilmaameedkoodu yahay caqliga aadanaha iyaga oo u sheega inta qoraaladooda akhriyaysa ama codadkooda maqlaysa in diimaha oo dhan oo ay ta islaamka ku jirto ay khuraafaad yihiin waxa ay farayaana ay yihiin wax caqliga caadiga ah ka fog,tiiyoo ay mararka qaar intaa ku kabaan arimo been abuur u badan oo lagu khaldi karo inta aan islaamka aqoonta badan u lahayn oo isugu jira axaadiis daciif ah ama kuwo saxiix ah iyo aayado quraan oo ay si qasad ah oga luminayaan macnahoodii oodii saxda ahaa iyo maqsadka iyo ujeedadii laga lahaa.
Anigoon dooneyn inaan ku dheeraado astaamaha qoladaa iminka uun umadda soomaaliyeed dhex keentay afkaarahaa gaalnimada ah ee aysan ab iyo isir u lahayn waxay ila tahay inay intaa ishaaro iyo in aragti guud oo laga qaato ku filan tahay.
Hadaan kuwaa kula xujaytanno caqliga ay leeyihiin Alle iyo diin ayuu inkirayaa waxaa ku filan in yar oo aysan jawaab caqliga ku qanco ka bixin karin.
Meelna uma dhaafi karaan hal aayad oo quraanka ku jirta oo fahamkooda xujo ku ah inta aragtida iimaanka qabtana u ah gaashaan uu rabbi rumeyntooda ku xoojiyay.
“قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ”
“Rusushii Eebe soo diray waxay ku yiraahdeen kuwii loo diray war ma ilaahay baa shaki gali kara sow maaha midka khalqay ee abuuray Samaawaadka iyo Arlada”.
Mulxidiin oo dhan hadday isu tagaan jawaab lagu qanco uma keeni karaan diidmadooda ku aadan cidda ka dambaysa abuurka jiritaanka iyo asbaabta kownkan ay ku dhex sugan yihiin.
Manaqaan iyo dunidi farsamo ka muuqato oo wax dhex yaalla ay isu wada baahan yihiin ayaa si iskeed ah isaga timid maaha jawaab lagu qanci karo oo caqli bad qaba laga raaridi karo!!!.
Halkaa goorta la marayo waxay naf bidaan oo isku dayaan inay ku gabadaan su’aalo aan macquulba ahayn sida inay yiraahdaan:-ilaahay yaa sameeyay?siduu ku yimid? Iyo hadduu isagaba iska samaysmay sow dunidaba iskama samaysmi karto iwm?!!
Jawaabaha su’aalaha waxaa ku filan in looga jawaabo,Alle asali ah iyo duni ficil la qabtay ku timid laysagama qiyaas qaadan karo,waayo Alle lama arag farsamana kama muuqato,wax kolka la arko ayuun baa lays weydiin karaa yaa sameeyay iyo sida uu ku yimid,laakiin dunida way muuqataa inay farsamo ka muuqato fal dhacayna ay ku timid oo mulxidiiinta iyagaa ku dooda inay dunida ku timid atamyo kala qarxay ama qaraxii weynaa“BIG BAN”. Yaa qabtay falkaas ilaa ma jiro fal faacil la’aan dhaco,ma jiro wax la sameeyay oo ay farsamo ka muuqato oo aysan jirin cid farsamaysay.
Iminka hadaad aragto wax kasta oo hortaada ka muuqdo kolkiiba waad ku qanci in waxa kuu muuqdaa ay cid uun qabatay muhiimna kuuma aha inaad indhaha ka qaaddo ood aragto ciddii qabatay,mana dhici karto oo caqli gal maaha inaad ku dooddo si waxa ii muuqda aan u rumeeyaa inay cidi qabatay waa inaan arkaa ciddii qabatay oo ay ila soo hadashaa aniga ama si uun iila soo xariirtaa!!!
Iminka hadaad dad ku tiraahdo labiska kuugu jira ee ka kooban dhar,kabo,saacad,far gashi,jijimo iwm ma rumeynayo waxa aan xiranahay inay wax hira yihiin ilaa aan si cayaan ah ula kulmaa shey kasta cidda sameysay ama qaabeysay waxay dadku kuu arki lahaayeen qof waashay ama soo wada!!.
Ilaahay in la arki waayay kama dhigna inuusan jirin,waayo waxaa dhici karta amaba xaqiiqo ah in bayologic ahaan aynaan u sameysneyn inaan nahay kuwo xamili kara aragtida Alle.
“لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ”.
“Aragyadu ma haleeli karaan Eebe ee isaga ayaa ah midka haleeli kara aaladaha wax lagu arko,waana mid turid badan oo khibrad badan”.
Abuur ahaanba uma samaysna uunka inay aragtida Eebe xamili karaan”.
Caqliga caadiga ah maahan wax uu garan waayay in Alle azali ah oon la arag farsamana ka muuqan,wax lagu shabahaa oo la mid ahina aysan jirin uu isagu dunidan samaystay asbaabta ay inta ku dul uumam ku jiraana uu isaga la yimid.
“لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)”
“Alle wax lagu mitaalaa oo caqli makhluuq qaadan karo ma jiro waana mid wax maqla waxna arka-maqal iyo aragti isaga u gaar ah oo makhluuq maleyn karaa ama ku fakari karaaba uusan jirin”.
Mulxidiinta kolkii lagu harqiyay su’aalaha maan galka ah ee diidmadooda ku gadaaman oo ay si macquula uga jawaabi waayeen waxay qaarkood billaabeen dib u gurasho iyo inay dhexdooda ka sii qaybsamaan oo la arko kuwo leh:-maya Alle waa jiraa lkn maaha midka ay diimuhu sheegayaan iwm?! Iyo kuwo leh Alle waana jiri karaa mana jiri karo!!!!,
Qaarkood waxay isku dayeen inay su’alaha xujadooda soo afjaraya kaga dhuuntaan khilaafaadka ka dhaxeeya inta Eebe si uun u rumaysan iyo kala aragti duwanaantooda,taasina way noqon weyday mid Alla diidyada garta dooda wax oga tarta,waayo iyaga maxaa ka quseeya kala aragti duwanaanta kuwa si uun ugu qanacsan jiritaanka awoodda weyn ee gunuday dunidan lagu nool yahay marba haddii ay iyagu asalka diidan yihiin.
Doodaha u dhaxeeya dadka sax iyo khalad si uun wax u rumeysan sheeko utaal mulxidiinta maaha kumana burin karaan jiritaanka midka jirsiiyay waxa jira.
Ugu dambeyntii waxaan kula talin lahaa kuwa la tacaala la talinta ama si uun mararka qaar dood ula tababtaabiya kuwa sita aragtiyada tamarta daran ee ku taamaya diidmada qayaxan ee jiritaanka Eebe inaysan la dhex maquuran doodaha aan mulxididiinta quseyn ee inta wax wada rumeysan u dhaxeysa,waayo taa waxay uun keeni kartaa waqti lumis iyo inaan loo dhicin abbaarta khaldan iyo afkaaraha caqli darada barkan ee ay ku guuxaan Alle diid yada wareeray ee xalka ka baadi goobaya ilxaadnimada oga sii daraysa.
Alle ha soo hanuuniyo mulxidiinta.
ARIMAHA DIIMAHA IYO FIRQOOYINKA., BARASHADA DIINTA, CAALAMKA ISLAAMKA, DAAWO VIDEO